Wakagadzirira 'isina muganho' Europe? Denmark inoseta muganho kutarisa pamuganhu weSweden
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Wakagadzirira 'isina muganho' Europe? Denmark inoseta muganho kutarisa pamuganhu weSweden
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • mhosva • Denmark Kuputsa Nhau • Hurumende Nhau • nhau • Kutarisirwa • chengetedzo • Sweden Kupwanya Nhau • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Akasiyana Nhau
Gurukota rezvemitemo reDenmark, Nick Haekkerup akazivisa nhasi mu Copenhague kuti nyika ichagadza chenguva dzemukati cheki cheki pamuganhu ne Siwidheni kutanga mwedzi unouya.
Kufamba uku kunouya mushure mekunge vaviri veSweden vapomerwa mhosva yekubatanidzwa mukuputika kunze kweDanish tax Agency munaAugust
Prime Minister Mette Frederiksen vakati panguva iyo hurumende yaifunga kusimudzira kudzora pamuganhu wayo neSweden.
Denmark yakabatana neSweden kuburikidza neiyo Oresund zambuko kuyambuka 10-mamaira Strait. Zviuru zvevagari vanobva kunyika mbiri idzi vanoyambuka muganho zuva nezuva nechitima nemotokari. Nyika mbiri idzi inhengo dzeEuropean Union.